I-27-intshi ye-iMac kunye ne-mini-LED yesikrini iya kwimveliso | Ndisuka kuMac
I-27-intshi ye-iMac enomboniso omncinci we-LED iya kwimveliso
Kucacile ukuba umsinga IMac ye-intshi ezingama-27 ukuba Apple ithengisa ineentsuku zayo zibaliwe. Sisiseko sokugqibela se-Intel kwikhathalogu yeMacs ebonelelwa yi-Apple ngoku, kwaye ngokusengqiqweni iya kutshintshwa kungekudala yinguqulelo entsha ye-Apple Silicon.
Amarhe amatsha abonisa ukuba oku kuphehlelelwa kuza kwenzeka kungekudala. Kuye kwaqinisekiswa ukuba uninzi lwababoneleli becandelo le-iMac entsha sele beqalisile ukubonelela ngeenxalenye zabo ezenziweyo ukulungiselela ukudibanisa okokugqibela. Imveliso iyaqhubeka.
I-DigiTimes ithumele nje a ingxelo apho echaza ukuba abathengisi abaninzi becandelo le-Apple sele beqalile thumela iimveliso zakho ezigqityiweyo kwizityalo zendibano ukuze zikwazi ukudibanisa i-iMac entsha ye-intshi engama-27 kunye nabaqhubekisi be-M1.
Kule ngxelo kucaciswa ukuba ukuthunyelwa sele kuqalisiwe ngemilinganiselo emincinci, yamacandelo ayimfuneko ukudibanisa entsha. IMac ye-intshi ezingama-27, kwindibano yayo iyonke ehambelanayo. Uphawu olucacileyo lokuba iya kukhululwa ngexesha elifutshane.
Okunokwenzeka, utshilo i-iMac entsha ye-intshi engama-27 iya kusungulwa ngentwasahlobo ka-2022. Ngokutsho kwamahemuhemu ebevela, iya kukhwela isikrini nge iphaneli ye-mini-LED, eya kuba neqondo eliphezulu lokuhlaziya i-120 Hz.
Ngoyilo olufana ne-24-intshi ye-iMac
Imithombo eyahlukeneyo ikwacebisa ukuba iya kuba nenkangeleko yangaphandle efana kakhulu ne-iMac entsha ye-intshi engama-24. Ngokunokwenzeka, unyusa iiprosesa M1 Pro kunye neM1 Max Zintle kangakanani na kwi-14-intshi kunye ne-16-intshi ye-MacBook Pros.
Nangona ngokobuqu, ndikholelwa ukuba ezo processors zenzelwe ukusebenza ngempumelelo ephezulu kakhulu, eyimfuneko kwiincwadi zamanqaku eziqhutywa ziibhetri, nalapho ukusetyenziswa okuphantsi kubalulekile. Kwi-iMac akufuneki ukuba iprosesa ibe "esebenzayo", kwaye olunye uhlobo lwe-M1 lunokuyilwa apho amandla okusebenza alawula ukusebenza kakuhle. Siza kubona ukuba i-Apple iyasothusa, okanye iyigcinele ikamva iMac Pro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » I-27-intshi ye-iMac enomboniso omncinci we-LED iya kwimveliso
Ukukhutshwa kweApple iTechnology yokujonga kuqala 137